နောက်ဆုံး ရေးသားချိန်6စက်တင်ဘာလ 2011 - 17:58 GMT
အခုအပတ် သင်္ခန်းစာ အမှတ် မှာတော့ တရုတ် မြင်းစီး အားကစားသမား Alex Huatian နဲ့ အတူ vital နဲ့ get on well ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းတွေကို လေ့လာကြည့်မှာပါ။
တခြားလူတွေနဲ့ ဆက်ဆံရေး ကောင်းသည်
Get နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အသုံးတွေ
Below are some more phrasal verbs with 'get'.
Just နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အသုံးတွေ
Below are some more phrases with the word 'just'.
just about: nearly, almost
2. Mr Smith isn't at his desk at the moment, but I will make sure he gets back toyou as soon
3. He is really sporty. He is really good at just aboutall sports!